Myanmar Dictionary :: permeable
(noun) သင့်တော် ကိုက်ညီအောင်လုပ်ခြင်း။
(adj) မှန်ကန်စွာ ဝေဖန်ဖော်ပြသော။
(adj) အတူတကွ ပူးပေါင်းကြံစည်သော။
(noun) going သွားခြင်း။ သွားလာခြင်း။ ကိုယ်လေးလက်ဝန်ရှိခြင်း။ ဇီးကပ်ခြင်း။ ပြုမူကျင့်ကြံပုံ။
(v.i) သွားသည်။ သွားရောက်သည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်သည်။ ညွှန်ကြားရာကို လိုက်နာပြုလုပ်သည်။ အခြေအနေ တစ်စုံတစ်ရာသို့ ရောက်သည်။ go-ahead ထကြွဖျတ်လတ်သော။ လုံ့လဝီရိယရှိသော။ to go between အောင်သွယ်-ကြားဝင်၍ စေ့စပ်-ပေးသည်။ ကြားလူ။ to go about one's business ကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စ ကိုယ်လုပ်သည်။ to go down အောက်ကျသည်။ ကျဆင်းသည်။ နှစ်မြှုပ်သည်။ to go too far အလွန်အကျွံ-စည်းလွန်ကမ်းလွန်-ဖြစ်သည်။ go on! ဆက်လုပ်။
(v.t) သွားသည်။ သွားရောက်သည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်သည်။ ညွှန်ကြားရာကို လိုက်နာပြုလုပ်သည်။ အခြေအနေ တစ်စုံတစ်ရာသို့ ရောက်သည်။ go-ahead ထကြွဖျတ်လတ်သော။ လုံ့လဝီရိယရှိသော။ to go between အောင်သွယ်-ကြားဝင်၍ စေ့စပ်-ပေးသည်။ ကြားလူ။ to go about one's business ကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စ ကိုယ်လုပ်သည်။ to go down အောက်ကျသည်။ ကျဆင်းသည်။ နှစ်မြှုပ်သည်။ to go too far အလွန်အကျွံ-စည်းလွန်ကမ်းလွန်-ဖြစ်သည်။ go on! ဆက်လုပ်။
(noun) ရုတ်တရက်-ဆွဲကိုင်ခြင်း-ဆုပ်ကိုင်ခြင်း-ဖမ်းဆီးခြင်း။ ရုတ်တရက်-ဆတ်ကနဲ-လုယူခြင်း။ grabber ရုတ်တရက်-ဖမ်းကိုင်-ဆုပ်ကိုင်သူ။ အလစ်သမား။
(v.t) ရုတ်တရက်-ဆုပ်ကိုင်သည်။ ဆွဲကိုင်သည်-ဖမ်းဆီးသည်-လုယူသည်-အဓမ္မသိမ်းပိုက်သည်။
(adj) တုတ်ခိုင် ဝဖိုင့်သော။
(adj) ခွက်ထိုးခွက်လှန် (ရယ်သည်)